Shirka Maamul u sameynta Jubbaland oo lagu wado inuu maanta furmo - iftineducation.com
iftineducation.com – Wararka kasoo baxaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta uu furmi doono shirkii maamulka loogu sameenayey gobalada Jubbaland oo abaabulikiisa in muddo ah soo socday.
Shirweynaha maamulka Jubbaland la doonayo in lagu dhiso ayaa lagu wadaa inuu ka furmo xarunta Jaamacada Kismaayo.
Xarunta Jaamacada Kismaayo
Magaalada Kismaayo ayey todobaadyadii lasoo dhaafay soo gaarayeen wafuud kala gedisan oo ka kala imaanayey gudaha iyo dibada dalka.
Shirka ayaa dhici lahaa bilowgii todobaadkan (23/2/2013) balse dib u dhac ku yimid, waxaa sidoo kale magaalada shaqaaqadii ka dhacday ay keentay in wakhti kooban shirkaani la hakiyo, xili ay sidoo kale magaalada kusoo fool lahaayeen wafuud dheeraad ah oo ka imaanayey gobalada dalka gaar ahaan gobalka Gedo.
Magaalada Kismaayo ayaa amnigeedu hada yahay mid sugan sida ay sheegeen maamulka Kismaayo iyo waliba ciidamada AMISOM oo iyagu si weyn hada ugu sugan gudaha magaalada Kismaayo.
Dadaalka lagu doonayo in lagu dhiso maamulka Jubbaland ayaa hada soo socday muddo labo sano ah waxaana kulamo horey uga dhacay Kenya ay ka wada qeybgaleen wafuud ka kala socota beelaha ku dhaqan gobalda Gedo, J/dhexe iyo J/hoose. Waxaana kadib kulamadaasi horudhaca ahaa ay dib uga bilowdeen gudaha gobalada Jubooyinka xili aan weli laga saarin Al Shabaab magaalada Kismaayo.
Maamulka kumeel gaarka ah ee Kismaayo loo sameeyey kadib markii Al Shabaab halkaasi ka baxay ayaa muddooyinka ku mashquulsanaa siduu uga dhabeyn lahaa qabashada shirweynaha maamulka Jubbaland lagu dhisayo, waxayna todobaadkii tagay casumaad u direen Dowlada Federaalka inay shirka kasoo qeyb gasho.
Dowlada Federaalka ayaa dhankeeda dhaliilsan habka loo waday maamul u sameynta gobalada Jubooyinka, waxaana labo maalmood kahor magaalada Kismaayo gaaray wafdi uu hogaaminayo Wasiirka Arrimaha Gudah iyo Amniga ee Soomaaliya.
Wafdigaasi oo la kulmay maamulka Kismaayo ayaan faah faahin ka bixin kulankii ay la yeesheen dhinaca Kismaayo, inkastoo ay uu Wasiirka Arrimaha Gudaha si guud u sheegay inay kala hadleen arrimaha siyaasada iyo Amniga.
Dowlada Federaalka ayaa dhankeeda ku baaqday kulamo ka dhacaya magaalada Muqdisho oo looga hadli doono arrimaha gobalada Jubooyinka, arrintan oo aan laga soo dhaweyn gobalada Jubooyinka.